निर्यात वृद्धिदर ५ प्रतिशतले घट्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर निर्यात वृद्धिदर ५ प्रतिशतले घट्यो
निर्यात वृद्धिदर ५ प्रतिशतले घट्यो
निर्यात वृद्धिदर बढाउन नसकिने सरकारी निष्कर्ष
काठमाडौं । चालू आव २०७४/७५ को पहिलो २ महीनामा कुल वस्तु निर्यातको वृद्धिदर ४ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही समयमा ७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको निर्यात चालू आवमा भने ३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।
अघिल्लो आवमा रू. ७३ अर्ब ४ करोडको कुल निर्यात हुँदा पहिलो २ महीनामा रू. १३ अर्ब १८ करोडको निर्यात भएको थियो । चालू आवको सोही समयमा यस्तो निर्यात ४० करोड रुपैयाँले बढेर रू. १३ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्यातको वृद्धिदर खुम्चिएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । उता अर्थ मन्त्रालय अहिलेकै अवस्थामा निर्यात बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । अभियानको जिज्ञासामा अर्थसचिव शङ्कर अधिकारीले अहिलेकै अवस्थामा निर्यातको वृद्धिदर बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए ।
निर्यातको वृद्धिदर घट्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि त्यसलाई बढाउन पनि नसकिने अर्थशास्त्रीको तर्क छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा. शङ्करप्रसाद नेपालले निर्यातको वृद्धिदर बढाउन बढी मूल्यका वस्तु निर्यातमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले अदुवा, अलैंची वा पश्मिना निर्यात गर्दैमा निर्यातको वृद्धिदर बढ्दैन, सरकार पर्यटन र सेवा उद्योगलाई बलियो बनाउने तिर लाग्नुपर्छ ।’
तथ्याङ्कले रू. १३ अर्ब ५८ करोडको कुल निर्यातमा सबैभन्दा धेरै रू. ७ अर्ब १३ करोडको निर्यात भारततर्फ भएको देखाउँछ । तर, यो निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले कम हो ।
भारत निर्यात हुने जूस, अलैंची, उनी गलैंचा, जीआई पाइप, टूथपेष्ट, तामाको तार, जूटको सामान, मसुराको दाल, पश्मिना, रेडिमेट गार्मेण्टलगायतको निर्यात घटेकाले त्यसतर्फको निर्यात घटेको देखाएको हो । उल्लेख भएका बाहेक निर्यातको मुख्य सूचीमा रहेका कतिपय वस्तुको यस अवधिमा निर्यात नै भएको छैन ।
सरकारले भारततर्फको निर्यातका लागि ५२ वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि समीक्षा अवधिमा ५२ मध्येका ४० वस्तुको निर्यातमा गिरावट आएको छ ।
अघिल्लो वर्ष भारततर्फ अहिलेको भन्दा रू. २४ करोड बढी रू. ७ अर्ब ३७ करोडको निर्यात भएको थियो ।
यस अवधिमा चीन र तेस्रो मुलुक जाने चिया, गरगहना, पशु आहार, धागो, तयारी पोशाक, पिना, वनस्पति घ्यूको निर्यात भने बढेको छ । जसले चीनतर्फको निर्यातलाई ४४ दशमलव ६ प्रतिशतले बढाएको छ । अन्य तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यात पनि ९ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ ।
२ महीनामा कुल वस्तु आयात भने ११ प्रतिशतले बढेर रू. १ खर्ब ६५ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको यसै समयमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब १ करोडको वस्तु भित्रिएको थियो । उच्च बजार मूल्यका पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, सुन, सिमेण्ट, सञ्चारका साधन तथा पुर्जालगायत वस्तुको आयात बढेकाले कुल आयात बढेको देखिएको हो ।